Mavhawero muChirungu: phonetics uye madudziro - UniProyecta
Mushure mekudzidza iyo manhamba muChirungu, ngatione mavhawero mumutauro uyu. Mavhawero mururimi rweChirungu, semutauro wechiSpanish, anongova mashanu: A, E, I, O, U. Musiyano chete ndewekuti mavhawero muChirungu anodudzwa zvakasiyana pane mumutauro wechiSpanish. Mune zvimwe zviitiko mavhawero aya anosvika pakuva nemisindo yakasiyana, zvichienderana nemazwi api uye nemashandisirwo aakaitwa.
1 Dzidza mavhawero eChirungu
2 Kududzwa kwema vowels muChirungu
3 Mavara eChirungu: Kutumidzwa uye Kunyora
4 Chirungu alphabet madudziro
5 Animal Alphabet muChirungu
Dzidza mavhawero eChirungu
Para dzidza mavhawero muchirungu Iwe unongofanirwa kudzidzira madudziro aro, nekuti mavhawero akafanana uye kune mashanu chete.
Aya ndiwo mavhawero uye padyo navo kududzira:
[wpsm_comparison_table id = »1 kirasi =» »]
Kududzwa kwema vowels muChirungu
Kunyangwe iko kududzwa chaiko kwe mazwi muChirungu Inooneka padhuze nechero yega, kuteerera mavhawero kunoita kuti ruzha rujairike uye tinogona kuridzokorora zviri nyore uye pasina matambudziko.
Pano tine vhidhiyo yekudzidza kududzwa kwemavhawero muChirungu.
Vhidhiyo iyi inoita kuti zvive nyore kududza mavhawero muChirungu, nekuti kuiteerera ichitaurwa kunoita kuti kudzidza kuve nyore.
Sezvatinogona kuona, mutauro weChirungu unoshandura zvachose iyo madudzirwo evhawero, kunze kwevhavhavha "O" ine ruzha rwakafanana. Mavara anonyanya kushandurwa ndiA, E naI. Vhawero E, semuenzaniso, anodanidzwa sevhawero I yemutauro wechiSpanish. Kune rimwe divi, vhawero I muChirungu rinodanwa kuti "ai", sekunge riive "ay" muchiSpanish.
Kududzwa kwevhavha A kunonyanya kuzivikanwa, nekuti neiri tsamba rinotanga arufabheti uye mavhawero, madudzirwo aro ndi "ei", zvinoita sekungoti "hei" muchiSpanish, zvakanakisa kuteerera kududziro mune odhiyo, se akapa vhidhiyo yatakapa.
Mavara eChirungu: Kutumidzwa uye Kunyora
Iwe unoda kudzidza mavara echiChirungu nenzira iri nyore here? Iwe uri munzvimbo chaipo, negwaro iri iwe unodzidza fomu yakakosha uye chimiro cheChirungu (Chirungu), inova mavara.
Kunyangwe ichiita sechinhu chemwana, kudzidza kubata nemusoro nekududza arufabheti nenzira kwakakosha, nekuti nenzira iyi tichadzidza mutauro weChirungu nekukurumidza uye unogona kuzviita.
Inogona kufarira iwe dzidza nezvema vowels muChirungu.
Arufabheti inoumbwa nemavara makumi maviri nematanhatu, bhii roga roga rinogona kuva makonzonendi kana vhawero, riine mazwi nemitsara zvinogona kugadzirwa.
MuchiRungu hapana Ñ, ñ uye vanodudzwa zvakasiyana.
Chirungu alphabet madudziro
Ngatione iwo mufananidzo kuti tizive kuti iwo mavara anonzwika sei nhare, iwo marira anonzwika sezvaakanyorwa:
Usatombo kunetseka kana iwe usinganzwisise kuti zvinotaurwa sei zvakanyorwa, saka isu takawedzera inotevera youtube vhidhiyo nenziyo kuti iwe unzwe izwi rimwe nerimwe ruzha nemazvo.
Inzwai kududzwa nenzira kwayo
Dzokorora rwiyo apo iwe uchiteerera kwariri
Dzosera vhidhiyo kuti uvateerere zvakare
Animal Alphabet muChirungu
Unyanzvi hwekukurumidza kubata nemavara mavara ealfabeti nekukurumidza kubatanidza imwe neimwe yetsamba iine zita remhuka, nenzira iyi unozorangarira mataurirwo ayo nhare. Icho chiitiko chakanakisa chekudzidza mavara.
kudzidziswa » Mitauro » Shona » Mavhawero muChirungu: Fonetiki uye Kududzwa
10 comments pane "Vowels muChirungu: phonetics uye kududza"
Kukadzi 7, 2017 pa11: 06 pm
Yakanaka sei uye didactic iyo yechirungu kosi
Kukadzi 14, 2017 pa8: 44 pm
Iwo manzwi rwiyo rwakanaka kwazvo
Gumiguru 19, 2017 pa7: 33 pm
Gumiguru 20, 2017 pa2: 36 pm
Mbudzi 28, 2017 pa1: 53 am
Mazvita, ndatovafunda nechirungu.
Kukadzi 23, 2018 na12: 42 am
Mhoro ndinodzidza sei
Kubvumbi 1, 2018 pa8: 41 pm
Ini pachokwadi ndakanga ndisingavazive, asi ndakashamisika nenzira yekudzidzisa nzira. Ndinoda kukwanisa kutaura newe kakawanda.
Chikumi 1, 2019 na4: 37 am
Nyamavhuvhu 9, 2019 pa5: 11 pm
Nyamavhuvhu 26, 2019 pa2: 16 pm